यी हुन् रिक्सा चलाएरै काठमाडाैँमा घर बनाउने लालबहादुर तामाङ - Ektm news
Home›विज्ञान प्रविधि›यी हुन् रिक्सा चलाएरै काठमाडाैँमा घर बनाउने लालबहादुर तामाङ
यी हुन् रिक्सा चलाएरै काठमाडाैँमा घर बनाउने लालबहादुर तामाङ
यी हुन् रिक्सा चलाएरै काठमाडाैँमा घर बनाउने लालबहादुर
काठमााडाैँ । भनिन्छ, ‘एउटै काममा निरन्तर लागिरह्यो भने एक दिन अवश्य सफल भइन्छ ।’ यो भनाइलाई चरितार्थ गरेका छन्, राजधानीको ठमेल क्षेत्रका रिक्साचालक लालबहादुर तामाङले । उनले रिक्साकै कमाइले काठमाडौंमा घर बनाए । छोराछोरी पढाए । छोरालाई स्टुडेन्ट भिसामा अस्ट्रेलिया पठाए । २२–२३ वर्षको उमेरदेखि रिक्सा चलाउन थालेका उनी सात दशक कटिसके अर्थात् ७१ वर्षका भए । तैपनि, उनमा जोश र जाँगर उस्तै छ । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
लालबहादुरलाई छोराले अब काम नगर्नु भनेर प्रेसर दिन्छन् । तर, उनी काम नगरी बस्दा आफू बिरामी नै हुने गरेको बताउँछन् । ‘छोराको कुरा मानेर एकपटक पाँच दिनजति त्यसै बसेको बिरामी नै भएँ,’ उनले भने ।samajikmedia.com बाट साभार
प्रहरी समेत छक्क पर्ने गरि काठमाडौँमा यौनधन्दा ...
मलेसियामा हराएका श्रीमानलाई पर्खिंदै श्रीमती रुँदै भन्छिन्, ...
भोली बैशाख १ गते देखि फेसबुक बन्द हुने बिषयमा सञ्चार मन्त्रालयले यसरी प्रस्ट परेको छ,
जब दुबईबाट काठमाडौं उडेको जहाज फर्कियो…
ख्याल गर्नुस !! पाइलटले यात्रुलाई कहिल्यै नभन्ने ५ कुरा
प्रदेश–२ मा प्रजनन् स्वास्थ्यको अवस्था दयनीय, इच्छाविपरीत गर्भधारण गर्न बाध्य
जानी राखौं उमेर पुगेका पुरुषहरुले वीर्य फाल्दा के हुन्छ ? नफाली राख्दा के हुन्छ ? – यस्तो छ कारण